Maka: usetyenziso lweselfowuni
NgoMvulo, Julayi 5, 2021 NgoMvulo, Julayi 5, 2021 UMax Sudyin
Lahamba ixesha apho ukuvelisa umxholo omkhulu kwakwanele. Amaqela okuhlela ngoku kufuneka acinge ngokuhanjiswa kwawo ngokukuko, kwaye ukubandakanyeka kwabaphulaphuli kwenza izihloko. Inkqubo yemidiya ingafumana njani (kwaye igcine) abasebenzisi bayo ababandakanyekayo? Ngaba iimitha zakho zithelekiswa njani nomndilili wecandelo? U-Pushwoosh uhlalutye amaphulo esaziso sokutyhala eendaba ezisebenzayo eziyi-104 kwaye ukulungele ukukunika iimpendulo. Zeziphi ezona zixhobo zeMedia zibandakanya? Ukusuka kwinto esiyibonileyo ePushwoosh,
I-AppSheet: Yakha kwaye uhambise iNkqubo yokuVunywa kweMfono ngePhepha leGoogle
NgoLwesibini, Matshi 16, 2021 NgoLwesibini, Matshi 16, 2021 Douglas Karr
Ngelixa ndiqhubeka nokukhula amaxesha ngamaxesha, andinazo zombini italente okanye ixesha lokuba ngumqambi wexesha elizeleyo. Ndiyaluxabisa ulwazi endinalo-luyandinceda ukuvala umsantsa ophakathi kwezixhobo zophuhliso kunye namashishini anengxaki mihla le. Kodwa… andijonge kuqhubeka nokufunda. Kukho izizathu ezibini zokuba ukuqhubela phambili kobuchwephesha benkqubo ayisosicwangciso-qhinga: Kweli nqanaba lomsebenzi wam-wam
I-Swing2App: Elona qhinga le-Ultimate No-code yoPhuculo lweApp
NgoMvulo, Novemba 16, 2020 NgoMvulo, Novemba 16, 2020 Douglas Karr
Kukho ubungqina obaneleyo phaya malunga nokuba ii -apps zeselfowuni zithathe njani ii-smartphones. Ukuba ayilikhulu, kukho iapps enye phaya ngaphandle kuyo yonke injongo. Kwaye okwangoku, oosomashishini abangoovulindlela basakhangela iindlela ezintsha zokungena kumdlalo wesisombululo sokuhamba. Umbuzo oza kuwubuza, nangona kunjalo: Ayisiyiyo kuphela ukuphuhliswa kwesicelo sokuhambisa imali kunye nokuchitha ixesha,